Kulan ay Isugu Yimaadeen Madaxda Xafiisyada horumarinta,haya’daha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn (NGO) ayaa ka dhacay hotel Xamda (BoFED Go NGO Forum Meeting) - Cakaara News
Jigjiga(CakaaraNews) Jimce July 26,2013.Kulan balaadhan oo loogu talagalay in ay ka soo qayb galaan Dhamaanba Xafiisyada Horumarinta DDSI,xafiisyada xiriirka shaqo la leh hay’adaha aan dawliga ahayn iyo Qaramada Midoobay(UN) oo lagu qabtay hotel Xamda. Kulankan oo barbilow u ahaa kulan wayn oo la qaban doono mudoyinka soo socda ayaa waxaa ka soo qayb galay Wasiir ku-xigeenka xafiiska maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha mudane Mubashir Dibad, Gaadhwadeenka gedisocodka khayraadka dibada ee hayadaha UNka iyo NGOyada mudane Cabdulahi Wayrax,
Dhanka kale kulankan oo ay ka soo qaybgaleen tiro kooban oo ka socotey xafiisyada horumarinta,hay’adaha aan dawliga ahayn NGOS iyo UN.
Ujeedada loo qabtay shirka wuxuu ahaa sidii loo cadayn lahaa waxa uu qabanayo golahan, shirku wuxuu isla meel dhigey in la doorto gudi, gudigaas oo howshiisu ay kamid noqon doonto in uu daraasad ku soo sameeyo sida ay u dhisan yihiin Forumyada ka jira 2da kilil ee OROMIA iyo TIGREY in la soo darasadeeyo guud ahaan qaab dhismeedkooda iyo xeerarka ay ku shaqayeeyaan. Sidoo kale Inla war galiyo xafiisyada ku lug yeelan doono forumkan,
inla diyaariyo qoralka tixraaca forumka (TOR), in gudiga uu soo fiiriyo soona indho indheeyo aqoona u ka soo qaato 2dii daraasad ee ay sameeyen HCU hada kahor. Waxaana kulankan lagu doortay gudi xafiisedyo qaban doona hawshan loogana fadhiyo iney ku soo dhameyaan mudo bil ah.
Magaca Gudi Xafiseedyada. 1. Xafiiska Maaliyada iyo Horumarinta Dhaqaalaha (Gudoomiye) 2. Xafiiska Beeraha, Dalaga iyo Horumarinta reer Miiga (Xog-hayn) 3.Xafiiska Ka Hortaga Abaaraha iyo Masibooyinka (Xubin) 4. .UN-OCHA 5. .Save International SCI 6. ACPA iyo 7. Jaamacada Jijiga.
Dhamaan xafiisyada kor kuxusan waxay soo magacaabi donaan xubnihii hawshan ka qayb qaadan lahaa. ugu danbayntii waxaa la’isla qaatay in ay gudiga soo badhigaan habka warbixintooda tixraaca (TOR) 1 September 2013 Kulan kan oo kusoo gabagaboobay is afgarad iyo rayn rayn.